ပခုံးအရွတ် ပြတ်သွားခြင်း၊ ပခုံးအရွတ် ပြဲသွားခြင်းနှင့် ပခုံးအရွတ် ကျောက်တည်ခြင်း
—၊ ပါမောက္ခဦးနေဝင်း (အရိုးခွဲစိတ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. ပခုံးအရွတ်ပြတ်တာ၊ ပြဲတာ (Rotator Cuff Disruption) ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းကို သိပါရစေဆရာ။ A. ပခုံးထိပ်ကြွက်သားတွေက လက်မောင်းထိပ်ရင်း ကြွက်သားတွေနဲ့ လာတွယ်နေတယ်။ အစပိုင်းမှာ ဒီကြွက်သားတွေက...